Ngaba unayo iPodcast? Ungalibali iflegi yeMic! | Martech Zone
Ngaba unayo iPodcast? Ungalibali iflegi yeMic!
NgoLwesibini, Februwari 10, 2015 NgoMvulo, Februwari 9, 2015 Douglas Karr
Omnye wabahlobo bam abalungileyo nguJoshua Dorkin, umseki we Iipokotho ezinkulu, inethiwekhi yokuncokola yabatyali bezindlu. Izolo, uJoshua wabelana ngefoto kuFacebook wakhe omtsha Iflegi kaMic.
Uninzi lweepodcasters zithatha ixesha lokurekhoda imiboniso yazo kwividiyo okanye zisasaze ngqo ngevidiyo. Kutheni ungathathi ixesha kwaye uqinisekise ukuba ividiyo yakho iphawulwe ngokufanelekileyo? Ukubeka Iflegi kaMic kwimakrofoni yakho enegama lakho le-podcast kunye ne-URL ngumbono olungileyo!
UJoshua uthenge iMic Flag yakhe kwiqela Impembelelo PBS, Abanceda abantu bayile kwaye benze i-Mic Flag yabo. Iimveliso zabo zibandakanya:
Iiflegi zeMic zeeMikrofoni ezigcinwe ngesandla -Nawuphi na ubungakanani besikwere, uxande okanye unxantathu mic iflegi ukuze ilingane nakuphi na ubukhulu bemakrofoni ephathwayo.
Iiflegi ezikhethekileyo zerediyo Izitayile zibandakanya iflegi ye-Impact Studio ye-EV309 ye-mount mount, i-Shure SM7s, kunye neeVideos kuzo zombini i-booms kunye ne-desktop microphone stand.
Iiflegi zeMic zeTowers -Impembelelo yeNqaba iyi-16 ″ x 3 ″ yemibala epheleleyo yokukhuthaza indawo kumacala omane. Ilingana nayiphi na indawo yokuma mic.
Iiflegi zeMic ezingenanto -Impembelelo yePBS ibonelela ngeeFlegi zeMakrofoni ezingenanto ngemibala emithandathu kunye nezitayile ezimbini.
Ezinye izinto zeNtengiso -Izibhengezo, iiLanyards, iZitikha zeBumper kunye nokunye.
Bhalisa ku IiVidiyo eziKhulu kwiYouTube kwaye Rhuma kwi IBiggerPocket Real Estate IPodcast.
tags: iipokotho ezinkuluUJoshua dorkiniiflegi zemicIiflegi zemakrofoniIifowuni ze-podcast micutyalo maliUmtyali mali wezindlu
Yonyusa ifuthe lakho kwiMithombo yeendaba kuLuntu ngesiXhobo seDatha esiSebenzayo seDatha
Mamela kwizinto ezibalulekileyo kwi-Twitter kunye neNarratif
UJoshua Dorkin @ BiggerPockets.com
Feb 10, 2015 ngo-12: 59 PM
Enkosi ngokwabelana, Doug! Kubulelwa kakhulu!